News 18 Nepal || नेपालको चाइनिज ताइपेइविरुद्ध सहज जित, विश्वकप र एसिया कप छनोट सम्भावना कायम
नेपालको चाइनिज ताइपेइविरुद्ध सहज जित, विश्वकप र एसिया कप छनोट सम्भावना कायम
काठमाडौं । कुवेतमा बिहिबार भएको खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई २–० ले पराजित गरेको नेपालले एसियन कप २०२३ को तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । साथै, फिफा विश्वकप २०२२ को तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्ने गणितीय सम्भावनालाई पनि जीवित राखेको छ ।
विश्वकप २०२२ र एसियन कप २०२३ को दोस्रो चरणको छनोट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेईविरुद्धको दोस्रो खेलमा नेपालले जित हात पारेको छ । कुवेतको जाबर अल हमाद स्टेडियममा बिहिबार भएको खेलमा नेपाल २–० गोलले विजयी भएको हो ।
यो नतिजासँगै नेपालले दुई वर्षपछि चीनले आयोजना गर्ने एसियन कपको तेस्रो चरणको छनोट प्रतियोगिताका लागि छनोट हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ । साथै, अर्को वर्ष कतारले आयोजना गर्ने फिफा विश्वकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्ने गणितीय सम्भावनालाई पनि जीवितै राखेको छ ।
दोस्रो चरणको छनोटको समूह बीमा रहेको नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई पराजित गरेपछि ६ खेलबाट ६ अंक पुर्‍याएको छ । चार खेलबाट १२ अंक बटुलेको अस्टेलिया शीर्ष स्थानमा छ भने समान पाँच खेलबाट समान १०–१० अंक बटुलेको कुवेत र जोर्डन क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।
दोस्रो चरणको जारी छनोट खेलको आठमध्ये आठै समूहको शीर्ष एक–एक टोली र आठै समूहको दोस्रो स्थानमा रहेकामध्ये उत्कृष्ट चार टोली कतार विश्वकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्ने व्यवस्था छ । नेपाललाई त्यसका लागि आफ्नो बाँकी दुईमध्ये दुवै खेलमा जितको नतिजाले मात्रै पुग्ने छैन, आफूभन्दा माथि रहेका टोलीहरूको नतिजामा पनि निर्भर पर्नुपर्नेछ ।
विश्वकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुगेका १२ टोली एसियनकप २०२३ का लागि पनि स्वत छनोट हुने छन् । दोस्रो स्थानका बाँकी चार, तेस्रो स्थानका आठ र चौथो स्थानमा रहेका आठमध्ये उत्कृष्ठ चार टोली एसियनकप ०२३ को तेस्रो चरणको छनोट प्रतियोगितामा पुग्ने छन् ।
चौथो स्थानमा रहेका बाँकी चार र पाँचौ स्थानका आठ टोलीले भने एसियनकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्न प्लेअफ प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने छ । आफ्नो समूहको चौथो स्थानमा रहेको नेपालको एसियनकपका लागि तेस्रो चरणको छनोट प्रतियोगितामा सिधै छनोट हुने सम्भावना रहेको छ । त्यो अवसर नपाए नेपालले प्लेअफ खेल्ने छ ।
नेपालले अब २४ जेठमा जोर्डन र २८ जेठमा अस्ट्रेलियासँगको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । नेपालले यी कुवेतसँगको दुईसहित जोर्डन र अस्टेलियासँग यसअघि खेलेको एक–एक खेलमा पराजय व्यहोरेको छ । प्रतियोगितामा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई मात्रै पराजित गरेको हो ।
यसै प्रतियोगिताअन्तर्गत झन्डै दुई वर्षअघि उसकै मैदानमा भएको पहिलो लेगको खेलमा पनि नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई २–० गोलले नै पराजित गरेको थियो । उक्त खेलमा दुवै गोल अञ्जन विष्टले गरेका थिए । यस पटक पनि नेपालका लागि पहिलो खेल उनै अञ्जनले पेनाल्टीमार्फत गरेका हुन् ।
आज युरोकपमा तीन खेल हुँदै, कुन देश कोसँग कति बजे भिड्दैँछन् ?
यूरो कप: नेदरल्याण्ड्स र बेल्जियम नकआउट चरणमा, युक्रेन पनि विजयी
आज युरोकपमा तीन खेल, क-कसको भिडन्त ?
युरो कप : इटाली नकआउट चरणमा, वेल्सको जित पश्चात टर्की बाहिरियो
रोनाल्डोले हंगेरीविरुद्ध खेल्दै बनाए एकैसाथ तीन कीर्तिमान
आज युरोकपमा तीन खेल, क-कसको हुँदैछ भिडन्त ?
असार ०४ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
असार ०३ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
नेपालमा आज बिहिबार कुन उमेरका कति संक्रमित थपिए ?
२०७८ साल असार महिनामा कस्तो छ तपाईको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
काठमाडौंमा फेरि बढ्यो संक्रमण, आज कति थपिए ?
सेती नदीमा बढ्यो पानीको बहाव, प्रशासनको यस्तो आग्रह
मेलम्ची नदिले धार परिवर्तन गर्दै कटान थालेपछि..
तपाईंलाई थाहा छ ? यी चार कुरा भूइँमा राखे हुँनेछ अनिष्ट
भारतमा घट्दै कोरोना संक्रमण, मृत्युदर पनि घट्यो
आज यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्टयाङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना
नदीहरुमा पानीकाे बहाव सतर्कता तहमै, कहाँ कहाँ छ जाेखिम ?